အလုပ်မဝင်မီကျန်းမာရေးစစ်ခြင်းနှင့်ပက်သက်၍မကြာခဏတွေ့ကြုံရသောမေးခွန်းများ - Intouchmedicare
Last updated: 2022-01-18 | 320 ကြည့်ရှုခြင်း |
အလုပ်မဝင်မီကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့သည် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် တနေ့တခြား ပိုအရေးကြီးလာသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၄င်းသည် ထိရောက်မှု့အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိသည်များမှာလုပ်ငန်းခွင်၏အရည်အသွေးကိုဖြစ်စေ၊လုပ်ငန်းခွင်၏အတွင်းစီမံခန့်ခွဲမှု့အားဖြစ်စေ၊အဖွဲ့အစည်း၏ပုံရိပ်အားဖြစ်စေ ရှု့ထောင့်များစွာမှပေါင်းစပ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့ခံယူပြီးကြောင်းအားအတည်ပြုရန် ဆေးလက်မှတ်ထောက်ခံစာရှိသည့်အခါ အလုပ်လျှောက်ထားသူများသည် ကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ (သို့) အလုပ်အားထိခိုက်နိုင်သောရောဂါများ ကင်းစင်ကြောင်းအားဦးစွာစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ သို့ပေမဲ့ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အံ့သြဆန်းပြားမှု့အသစ်တစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း အလုပ်မဝင်မီကျန်းမာရေးစစ်ခြင်းသည် အချို့သောသူများအတွက်တော့ သံသယရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။အလုပ်မဝင်မီကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့နှင့်ပက်သက်သည့်အချက်အလက်များအားသင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့မှမကြာခဏတွေ့ရသောမေးခွန်းများအားစုစည်းဖော်ပြထားပါသည်။
Intouch Medicare ဆေးခန်း၏အလုပ်မဝင်ခင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းပရိုဂရမ်ဘာအမျိုး အစားများရှိပါသလဲ?
အလုပ်မဝင်မီကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းဆိုသည်မှာ ဆေးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရန်လျှောက်ထားသူများ၏ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့ဖြစ်ပါသည်။အဖွဲ့အစည်း (သို့) ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီ၏ သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းအရ အထွေထွေအခြေခံစစ်ဆေးရန် ဆေးစစ်စာရင်းများနှင့်သီးခြားအုပ်စုစစ်ဆေးမှု့များဖြစ်သည့် ဥပမာ အစားအသောက်ကိုင်တွယ်သူကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့များ၊ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့များ၊အမြင့်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းစသည်ဖြင့် ဆေးစစ်သူအား ဆရာဝန်မှ ရောဂါ5မျို၊ရောဂါ9မျိုး၊ရောဂါ 10 မျိုးအတွက်ဆေးလက်မှတ် (သို့) ဆေးလက်မှတ်ထောက်ခံစာ ဆောနော 11 ပုံစံအတိုင်းဖြစ်သည့် ဆေးစစ်ချက်များအား အမှန်တစ်ကယ်လာစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆေးလက်မှတ်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်
လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတိုင်းသည် ကျန်းမာရေးကောင်းသောသူများကိုသာအလုပ် လုပ်စေလိုပါသည်။ အလုပ်မစတင်မီကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းသည် အလုပ်လာလျှောက်သူ၏ကျန်းမာရေး အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည့် ဥပမာ အစားအသောက်ကိုင်တွယ်သူ၏ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းသည် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း၏ကျန်းမာရေးနှင့် ဖောက်သည်များအားဝန်ဆောင်မှု့ပေးရာတွင်ကူးစက်နိုင်သောရောဂါ (သို့) အလုပ်အားထိခိုက်နိုင်ချေမရှိကြောင်းနှင့် သေချာသောသင့်တော်မှု့ရှိခြင်းအားမှန်းဆနိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးလိုသောသူများအစိတ်အပိုင်းနှင့်ပက်သက်၍မိမိခန္ဓာကိုယ်၏ပုံမှန်မဖြစ်မှု့များ ဖြစ်သည့် ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေရှိ/မရှိခြင်းအား သိနိုင်ပြီး သင်ကိုယ်သင်မှန်ကန်သင့်တော်စွာဂရုစိုက်နိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အချို့သောသူများသည် အလုပ်မစတိုင်မီ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းအား မသိဖူးသေးသောသူများလည်းရှိကြပါသည်။
၄င်းသည် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးအကျိုးခံစားခွင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း ရေရှည်တွင်လျော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျန်းမာရေးကောင်းသောသူများကိုသာ အစကတည်းက အလုပ်လုပ်ရန်ရွေးချယ်ထားခဲ့ခြင်းစသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
အခြေခံအားဖြင့် အထွေထွေသာမန်စစ်ဆေးမှု့များတွင် CBC (သွေးအရည်အသွေး၏ပြည့်စုံမှု့အားစစ်ဆေးခြင်း)၊Urinalysis (ဆီးစစ်ခြင်း)၊Stool Examination(ဝမ်းစစ်ခြင်း)၊Stool culture (ပိုးမွေး၍ဝမ်းစစ်ခြင်း)၊ChestX-ray (အဆုပ်ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း)၊Color Blindness Test(အရောင်အမြင်အာရုံစစ်ဆေး)၊Creatinine (ကျောက်ကပ်လုပ်ဆောင်ချက်)၊Anti-HIV (အိပ်ချ်အိုင်ဗီပိုးစစ်ဆေးခြင်း)၊HBsAg(အသည်းရောင်အသားဝါဘီပိုးစစ်ဆေးခြင်း)၊Uric acid (ယူရစ်အက်ဆစ် ဂေါက်ရောဂါစစ်ဆေးခြင်း)၊ Amphetamine (ဆီးတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ဆေးးခြင်း)၊ Pregnancy test (ကိုယ်ဝန်စစ်ဆေးခြင်း)၊ ABO Group (သွေးအုပ်စုစစ်ဆေးခြင်း) ထိုသို့ စစ်ဆေးမည့်သူ(သို့)အဖွဲ့အစည်း၏လိုအပ်သည့်ပရိုဂရမ်အတိုင်းခွဲထွက်သွားသော ပရိုဂရမ်အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။
4. Intouch Medicare ဆေးခန်း၏အလုပ်မစတိုင်မီကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့ပရိုဂရမ်သည်ဘယ်လို အမျိုးအစားများရှိပါသလဲ
Intouch Medicare ဆေးခန်း၏အလုပ်မစတိုင်မီကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့ပရိုဂရမ်သည် အဓိကအမျိုးအစား2မျိုးခွဲခြားထားပါသည်။၄င်းတို့မှာ-
စံနှုန်းမီပရိုဂရမ် : ဤသည်မှာ အလုပ်အကိုင်အတွက် အလုပ်ခန့်ရာတွင်ထည့်သွင်းစဥ်းစားရန်လိုအပ်သည့်အရာများအားထွေထွေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် သင့်တော်ပြည့်စုံသောစစ်ဆေးမှု့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအတွက်ပရိုဂရမ် : ပါဝင်ပါသည်။
အုပ်စု 1 အထွေထွေစက်ရုံဝန်ထမ်းများ၊ကုန်တိုက်ဝန်ထမ်းများ၊PC၊ငွေစာရင်းကိုင်
အုပ်စု2စားသောက်ဆိုင်အုပ်စုဝန်ထမ်းများ၊စားဖိုမှူး၊စားပွဲထိုး
အုပ်စု3အထွေထွေဟိုတယ်အုပ်စုဝန်ထမ်းများ၊ရီဆော့ဝန်ထမ်းများ
အုပ်စု4ရုံးဝန်ထမ်းအုပ်စုများ
အုပ်စု5သီးသန့်ကန့်သတ်နေရာများတွင်အလုပ်လုပ်သောအုပ်စုဝန်ထမ်းများ
အုပ်စု6ကလေးထိန်းနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်သည့်အလုပ်အားလုပ်သည့်အုပ်စုဝန်ထမ်းများ
အုပ်စု7အမြင့်တွင်အလုပ်လုပ်သောအုပ်စုဝန်ထမ်းများ
5. စစ်ဆေးသည့်အချိန်ကြာပါသလား အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရမည်လား ?
Intouch Medicare ဆေးခန်း၏အလုပ်မစတင်မီကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့သည် ကိစ္စတစ်ဦးစီ၏စံချိန်မီသောစစ်ဆေးမှု့အစီအစဥ်အချိန်ကြာမြင့်မှု့သည် မိနစ် 40 အတွင်းစောင့်ဆိုင်းနိုင်သော်လည်းရွေးချယ်သောပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်၍ မိနစ် 30-40 ခန့်ကြာပါသည်။ဆေးစစ်ချက်အဖြေရလဒ်များလက်ခံရရှိရန်သတ်မှတ်ထားသောစံချိန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။သို့ပေမဲ့ အကယ်၍ ပိုးမွေး၍ဝမ်းစစ်သောအစီအစဥ် Stool culture ပါရှိသည့်စစ်ဆေးမှု့သည် အချိန်3ရက်စောင့်ရန်လိုအပ်ပြီး (သို့)အခြားစစ်ဆေးမှု့အစီအစဥ် (ပြင်ပသို့ပို့ရသော Lab သွေးစစ်မှု့မျိုးဖြစ်ပါက)စစ်ဆေးမှု့ရလဒ်အဖြေအား 1-2 ရက်ထိစောင့်ယူရပါသည်။ထိုသို့ဆိုလျှင် စစ်ဆေးမှု့ရလဒ်များအားအသိပေးရန် ဆေးစစ်သူမှမိမိအဆင်ပြေသလို ဆေးခန်းအား စာတိုက်မှပို့ဆောင်ခြင်း(သို့)ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်၍အကြောင်းကြားနိုင်ကြောင်းအားတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
6. ပြင်ပနေရာများသို့ထွက်ပြီးစစ်ဆေး၍ရ (သို့) မရခြင်း?
ပြင်ပနေရာဖြစ်သော လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းပရိုဂရမ်အစီအစဥ်အား လိုချင်သူများသည် ကော်ပိုရိတ်ဖောက်သည်များအတွက်မိမိလိုအပ်သလို အသေးစိတ်အချက်အလက်များ (သို့) ခန့်မှန်းချေနှင့်ညှိနှိုင်းစျေးနှုန်တင်ပြပြီးဆောင်ရွက်ပေးရန်အချက်အလက်များအပါအဝင်အကဲဖြတ်ရန် ဆေးခန်းသို့ဆက်သွယ်ပေးပို့၍ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့၌ Med Refer စနစ်ဖြင့် ဝန်ထမ်းများအားလိုချင်သောကျန်းမာရေးပရိုဂရမ်အစီအစဥ်အတိုင်း ဆေးခန်းသို့ ပေးပို့စစ်ဆေးနိုင်ပြီး ရလဒ်အဖြေများအား အဆင်ပြေမြန်ဆန်စွာရရှိနိုင်သော အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့်ပို့၍စစ်ဆေးနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှု့လည်းရှိပါသည်။
7. အလုပ်မစတင်မီ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့အတွက် ဘာတွေပြင်ဆင်ရမည်နည်း?
Intouch Medicare ဆေးခန်း၏အလုပ်မစတင်မီကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့သည် အဆင်ပြေမြန်ဆန်ခြင်းနှင့်တိကျသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအား ပံ့ပိုးပေးပါသည်။စစ်ဆေးမည့်သူသည် အစားနှင့်ရေအား ရှောင်လာရန်မလိုအပ်ပါ။ တံတောင်ဆစ်၌သွေးဖောက်စစ်ဖို့ရန်အတွက်အဆင်ပြေနိုင်သောရှပ်အင်္ကျီကို၀တ်လာသင့်ပါသည်။လုံလောက်သောအနားယူမှု့နှင့်အိပ်ရေးအ၀အိပ်လာဖို့ရန်လိုအပ်သည် စစ်ဆေးမည့်နေ့တွင်အိပ်ရေးမပျက်လာသင့်ပါ။ရိုက်ထားသောအဆုတ်ဓါတ်မှန်ဟောင်းရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍အကြိမ်တိုင်းယူဆောင်လာပေးပါရန်နှင့် အကယ်၍ ကိုယ်ဝန်ရှိနေသည်ဟုသံသယရှိပါက စစ်ဆေးမှု့မပြုမီဝန်ထမ်းများအားကြိုတင်အကြောင်းကြားရပါမည်။
အလုပ်မစတင်မီ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးလိုသောသူများသည် စစ်ဆေးသူတစ်ဦးချင်း (သို့) အဖွဲ့အစည်းများအတွက် Intouch Medicare ဆေးခန်းတွင်ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ (သိုံ) သင်အိမ်နှင့်နီးသော ဆေးခန်းဟု Google တွင်ရိုက်ရှာခြင်းဖြင့် သင်နှင့်နီးသော ဆေးခန်းဌာနခွဲတိုင်းတွင်ဝန်ဆောင်မှု့အားရယူနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဝန်ဆောင်မှု့ပေးရန် အတွေ့အကြုံကြာရှိ၍ရင့်ကျတ်သော အဖွဲ့အစည်းအများစု၏စံနှုန်းမီယုံကြည်မှု့အားရရှိထားသောဆရာဝန်များနှင့်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့များရှိပါသည်။ထို့ကြောင့် သင်၏ရလဒ်များအား အဆင်ပြေမြန်ဆန်တိကျစွာနှင့် အိတ်ဆောင်သက်သာသောစျေးနှုန်းဖြင့်ရရှိလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။